Ny soavaly volondavenona: palitao, karazany ary toetra. | Soavaly Noti
Toy ny mitranga amin'ny Soavaly Zaino, ny soavaly tordillo na volondavenona dia manana akanjo mampiavaka azy sy mampiavaka azy na inona na inona karazany izay an'ny Equine. Ny antokom-pivavahana Ny "Thrush" dia avy amin'ny anaran'ny vorona manana ny lokony amin'ireto equines ireto: volondavenona misy tasy fotsy amin'ny fomba isan-karazany.
La sosona torda dia a nomena lanja tokoa ary ankasitrahana amin'ny karazany mitovy amin'ny Equine. Ny soavaly volondavenona, Matetika izy ireo dia teraka miaraka amin'ny loko mainty izay nanjary mazava kokoa amin'ny fandehan'ny fotoana na inona na inona karazana volony. Ity fizotran-javatra ity dia vokatry ny endrika fametahana azy. Hahafantatra bebe kokoa momba ity karazana palitao Equine ity ve isika?
Alohan'ny hanoritsoritana ny toeto-soavaly volondavenona dia te-hanao fanamarihana kely momba ny soavalin'ity palitao ity isika. Raha manana iray amin'ireo biby tsara tarehy ireo ianao dia zava-dehibe ny fiheverana ny lafiny iray amin'ny fahasalaman'izy ireo, ary izany dia 75% ny santionan'ny thrush mihoatra ny dimy ambin'ny folo taona no miteraka melanomas jinja. Amin'ny tranga sasany ireo melanoma ireo mety ho tonga ratsy fanahy izy ireo, ary noho izany dia tsy maintsy mitandrina amin'ny biby isika.
Melanoma dia karazana homamiadana izay amin'ny soavaly volondavenona dia manana endrika maizina any amin'ireo faritra somary mikitroka toy ny eo ambanin'ny rambony. Amin'ny tranga maivana dia azo tsaboina amin'ny menaka manitra sy antibiotika, na dia ireo tranga tena lehibe aza dia miafara amin'ny fivalanana ary tsy maintsy esorina amin'ny fandidiana. Mba tsy hahatratra an'ity toe-javatra ity na tsy hanohana azy Zava-dehibe ny fandraisana fepetra fisorohana tsotra toy ny fisorohana ny fisehoan'ny hazavantsika amin'ny hazavan'ny masoandro mivantana mandritra ny ora afovoan'ny andro. Ho fanampin'ny fikarakarana izay ilain'ny soavaly rehetra dia manana fahasalamana tsara, toy ny sakafo tsara na fanatanjahan-tena mifanaraka amin'ny karazany sy ny taonan'ny biby.
1 Ny volom-bolo
1.1 Dingana amin'ny fizotran'ny depigmentation
1.1.1 Dingana 1: ny palitao foy
1.1.2 Dingana 2: Thrush Fledgling
1.1.3 Andiany 3: Thrush mihorona maizina
1.1.4 Dingana 5: thrush thrush sy atruitats ny Muscat
1.1.5 Dingana 6: Thrush fotsy na fotsy
2 Karazan'ilay soavaly volondavenona
Lafiny iray mifandraika amin'ny tontolo Equine ny ny volony (takatra ho toy ny napetraka noforonin'ny volon'ny vatana, ny mony ary ny rambony) izany afaka mampita fampahalalana tena ilaina momba ny biby amintsika toy ny fandrefesana ny fahasalamanao na ny fanombanana ny fahafahanao manompo ny olombelona.
Eumelanin sy pheomelanin dia pigment roa vita amin'ny melanosit (ny sela mijanona ao anaty dermis izay mahatonga ireo loko manome loko ny hoditra sy ny volo) ary noho izany izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny tonionalin'ny palitao Equine. Ny voalohany dia pigment mainty na volontany, ary ny faharoa mena na mavo. Samy mamoaka ilay antsoina hoe tononkalo fototra izay mivadika ho fanamiana ary somary maizina. Tonaly maro be no mivoaka avy amin'izy ireo rehefa manomboka mihetsika ireo fototarazo fanalefahana izay manamaivana ireo palitao ireo. Ny tsy fisian'ireo pigment roa, na manontolo na ampahany, miteraka albino sy albinoïde tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao, inona no nanjaitra ny depigmentation mampiavaka ny volondavenona?
Dingana amin'ny fizotrany depigmentation
Naneho hevitra izahay tamin'ny voalohan'ny lahatsoratra fa ny soavaly volondavenona dia matetika teraka miaraka amin'ny akanjo mainty izay manamaivana. Raisina an-tanana ity fizotran'ny depigment ity, izay pigmentation hoditra sy maso mitovy tsy miova, azo apetraka dingana arakaraka ny fotoana nahitana ny palitao ny soavaly volondavenona:
Dingana 1: ny palitao foy
Ny foza fotsy dia teraka miaraka aminy palitao mahazatra, mazàna miloko mainty, misy faningana tsy fahita firy azo teraka izany miaraka amina dingana volondavenona mandroso na fotsy tanteraka. Matetika ny volomaso sy ny manodidina ny maso dia manondro ny toetran'ny thrushes mampiseho volo fotsy amin'ireo faritra ireo.
Dingana 2: Thrush Fledgling
Miaraka amin'ny palitao voalohany nandatsaka volo fotsy sasany hita eo amin'ny vatana. Ireo maro kokoa amin'ny lohany, raha ny mane sy ny rambony dia mety ho fotsy kokoa noho ny vatana na maizina kokoa.
Dingana 3: Thrush Rolled maizina
Volo fotsy lasa izy ireo maro kokoa miaraka amina molts nifandimby taorian'ny voalohany. hita mitambatra miaraka ary mamorona teboka fotsy kely amin'ny akanjo vita amin'ny tany izay maizina mazàna. Ireo boribory ireo dia mety ho boribory endrika ary somary lehibe ny habeny. Ireo teboka ireo dia misaraka amin'ny volo mainty. Noho izany ny antokom-pinoana "thrushes wheeled".
Dingana 4: Thrush Rolled mazava
Amin'ity dingana ity volo fotsy no manjaka raha oharina amin'ny mainty, manome ny equine fisehoana mazava kokoa. Io fitomboan'ny volo fotsy io dia miteraka ny haben'ny teboka amin'ity loko ity mampitombo ary manomboka mitambatra mamela ny faritra volo mainty mitoka-monina samy izy ary, amin'ny tranga sasany, miaraka amin'ny endrika boribory.
Dingana 5: thrush thrush sy atruitats ny Muscat
Tohizo ny nitombo volo fotsy aryvokatr'izany, ny fihenan'ny volo mainty mandra-pahatongan'ny teboka mainty kely sisa. Izy io dia antsoina hoe "muscat thrushes" raha mainty na volontany ny palitao fototra ary "tordos atruitats" raha chestnut na chestnut ny palitao.
Dingana 6: Thrush fotsy na fotsy
Amin'ity dingana farany ity amin'ny fiovan'ny soavaly volondavenona, volony rehetra (izay misy ny rambo sy ny mana) lasa fotsy tanteraka. Amin'ny tranga sasany, somary manokana kokoa, fihemorana mety hitranga maninona aorian'ity dingana farany ity, mitovy ny faritra misy pigmente.
Araka ny karazany an'ny soavaly volondavenona, mety hanolotra fiovana amin'ny dingana depigmentation. Soavaly Thoroughbred Andalusian na soavaly Lusitanianina no manana dingana mihodinkodina be marika. Amin'ny karazany hafa toy ny Arabo, dia mahazatra ny dingana mihodina ho malemy fanahy tokoa na tsy misy mandeha mivantana any amin'ny muscat sy atruitats.
Karazan'ilay soavaly volondavenona
Ho fanampin'ireo anarana samihafa arakaraka ny fizotran'ny fijanonan'ny akanjo misy ny soavaly dia afaka mahita isika karazany isan-karazany amin'ny resaka loko palitao ny soavaly volondavenona. Ny antokom-pinoana sasany amin'ny karazany dia mitovy ary misy ifandraisany amin'ny dingana.
Volondavenona maivana, Io ilay manana volo mainty eo amin'ny hatoka, any an-damosina sy eo amin'ny rump, amin'ny kapaoty volo fotsy.
Misafoaka thrush, Ireo no misy volo fotsy voaravaka teboka mainty kely toy ny lalitra. Ity dia iray amin'ireo palitao hajaina indrindra ao anatin'ireo karazana thrushes.
Thrush volafotsy na argenteado, manana volo fotsy sy mamiratra misy volo mainty vitsivitsy, izay manome endrika mivaingana sy mamirapiratra toy ny volafotsy manjelanjelatra. Rehefa marary ity karazana palitao ity, ny hatoka sy ny tapany ambony amin'ny lohany dia heverina ho akanjo tsara izany.
Sakafo kisoa, Ilay manana volo mainty be noho ny fotsy.
Mihetsiketsika izy ireo no mitovy amin'ny volo fotsy misy sosona mainty tsy misy filaharana na ampahany.
Thrush nanakodia, nolazaina tamin'ilay soavaly fa ao an-damosina sy ny haunches dia misy teboka lehibe sy boribory misy volo mainty kokoa noho ny sisa amin'ny palitao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly fotsy na tordillo, ireo mampiavaka ny palitaony